Ink dee: Real-Oge, Ahaziri na Nwalee Email Marketing | Martech Zone
Ink dee: Real-Oge, Ahaziri na Nwalere Email Marketing
Fraịde, Ọgọstụ 16, 2013 Thursday, August 15, 2013 Douglas Karr
Imirikiti nyiwe email bụ static… ozugbo ozi-e hapụrụ ndị na-eweta ya enweghị ụzọ isi gbanwee ọdịnaya. Otú ọ dị, ọ dị mwute, ebe ọ bụ na ihe omume nwere ike ime na ọdịiche ahụ. Ikekwe ị bụ ụlọ ọrụ ecommerce ma ugbu a ị nweghị ngwaahịa nke ire ere. Chọrọ ka ndị folks mepee wee pịa naanị ka ịchọta ngwaahịa ahụ adịghị?
Ikekwe ị na-anwale oku ole na ole dị iche iche ma chọpụta nke na-eduga site na ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na ọnụọgụ pịa, ị nwere ike imelite CTA na email ahụ maka ndị laghachiri ya ma ọ bụ emepebeghị ya. ma? Na Ibughari ink dee ya, email na-adị ngwa ma na-anabata na ezigbo oge. Ha na-ere Agile Email Marketing na-enye gị ikike ị gbanwee ozi dị na igbe nnabata mgbe ezigala ha, na-eme ka odi mkpa, njikọ aka, na nloghachi na itinye ego.
Gini banyere gunyere ndi mmadu na ndi mmadu na-ekwuputa ndi mmadu na ndi na-eso uzo na oge n’ime ọdịnaya email? Movable Ink's email marketing platform na-enye gị ohere ịhazi ma melite ọdịnaya email gị na igbe mbata.
Lee ụfọdụ igodo atụmatụ Ibughari ink dee n'elu ikpo okwu:
Ndụ Ọdịnaya - Embed ndụ ọdịnaya site na ebe nrụọrụ weebụ gị, dọpụta RSS na API na-abanye n'ime email, gosipụta vidiyo kpọmkwem n'ime igbe mbata, ma kpoo omume ndị metụtara ngwaọrụ (wdg., Ngwa mkpanaka na-etinye ma malite).
onodu - Mepee ọdịnaya email site na oge, ọnọdụ, ngwaọrụ yana ihu igwe.
Data akụkọ ihe mere eme - Jiri usoro na usoro iji mee ka ọ dị mkpa. Mkpebi na ofufe dabere na igwe mmadụ, zụrụ ahịa n'oge gara aga na data omume. Jikọta na ọdụ data nke atọ na ngwaọrụ ndị eji ege ntị.
Analytics - Advanced metrics withghọta n'ime ọgụgụ-ogologo, ga-emepe site na ngwaọrụ, nnata ebe, na ndị ọzọ. Nweta nnabata oge na ntanetị ma ọ bụ site na email dị ndụ.
Optimization - Na-eduzi ule A / B kewaa ma bulie mgbasa ozi n'etiti izipu. Ghota ihe okike dabere na ntinye aka.
Social - Tinye Ememme Facebook, Pinterest, Twitter na Instagram na-abanye na ozi ịntanetị. Mee ka nkwenye na ntụkwasị obi kwalite iji eserese mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Tags: ule uleemail di omiminyocha emailFacebookinstagrammbughari inkozi emailPinterestezigbo oge emailTwitter
Mixpanel: Omenala, Ihe Omume Merenụ
Scup: Social Media Monitoring, Nyocha na njikọ aka